March 3, 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on မောင့်အလိုကျ
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on အမူပိုတဲ့အန်တီ
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on ဘောစိမမကြီး
ည ၁၁ နာရီကျော်နေပြီ….. အိပ်ယာထဲမှာ ဘယ်ညာ လူးလိမ့်ရင်း အိပ်လို့မရနိုင် ဖြစ်နေသည်….. လက်တဖက်မှ ယောင်ယမ်းကာ ရင်နှစ်မွှာကို ပွတ်သပ်နေမိသည်… သက်ပြင်းမောများချကာ ကြိတ်မှိတ်၍ ခံစားနေရသည်….လျော့တိလျော့ရဲ ထမီအောက်မှ ဖားပေါင်စင်းတစ်ကောင် လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ပေါင်နဲ့ ပွတ်မိနေပြန်သည်…. ငိုချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာမိသည်… ဒီခံစားချက်ရဲ့ အထွဋ်ထိပ်ကို သူမခံစားဖူးသည်.. ယ္ခုတစ်ယောက်ထဲ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ဆိုတာ ရာနှုန်းပြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာသိ၍ ခံစားနေရ၏.။ သူ့နာမည်က မသန္တာချိုနွယ်……. သူမရဲ့ချစ်လှစွာသောအမျိုးသားမှာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှ လက်ထပ်ပြီး တစ်ပတ်ကျော်မှာပဲ အမှတ်တမဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်… ဆေးစစ်ချက်တွေအရ အသည်းတစ်ခြမ်းကြီးနေလို့ ဟု ဆိုသည်…….အခုမှ အိမ်ထောင်ကျခါစ ., ကာမသွေးတွေ ဆူနေတုန်း …. ယွစိယွစိနဲ့ ပိုးလေးတွေကို ဆွပေးခဲ့သလိုပဲ.. ။
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on အားမရနိုင်တဲ့သူမ
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on ထကြွနေတတ်သည်
မျိုးကို ဘားအံကိုရောက်တာ တစ်လကျော်ပြီ။ လုပ်ငန်းတို့းချဲ့နိုင်ရန်ကုမ္ပဏီမှ သူ့ကို စေလွှတ် လိုက်သည်။လုပ်ငန်းလုပ်ရန်နှင့် ရုံးခန်းဖွင့် နိုင်ရန်အဆင်ပြေမပြေ သူ့ကို ကွင်းဆင်းရန် စေလွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။မြေနေရာက ရှိပြီးသားမို့ အဲ့နေရာတွင် ရုံးတစ်ခုဆောက်ပြီး လူနေနိုင်ရန် အဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေသည်။လတ်တလောက ဘာမှမ ဆောက်ရသေးတာမို့ သူ ဘားအံတွင်နေဖို့ စုံစမ်းရာ အဆောင်သဘောမျိုးငှါးနေလို့ရတာ နဲ့ အဲ့အိမ်မှာငှါးနေလိုက်သည်။ငှါးနေတဲ့သူ လေးငါးဦးရှိပြီး ငယ်ရွယ်သူတွေချည်းမို့ သူနဲ့အဆင်ပြေသည်။ယောက်ကျားလေးတွေမို့လဲ ခဏနဲ့ ရင်းနှီးသွား ကာ သူလုပ်ချင်သည်များကို စုံစမ်းလွို့ယ် သည်။သူတို့ကုမ္ပဏီက စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီအကြီးတစ်ခု။သူကတော့ product အင်ဂျင်နီယာ။လုပ်တာကိုင်တာနဲ့ အရည် အချင်းတွေကြောင့် ရာထူးခဏလေးနဲ့တိုးကာ လူကြီးသဘောကျသည်။
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်း
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on ခေးရဲ့ကိုကြီး
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on နှစ်ဦးနှစ်ဖတ်
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on အသွေးအသား
Posted on March 3, 2021 Author admin	Comments Off on စိတ်ကျေနပ်စေသောအရာ